QM oo dalbaday Mallaayiin Dollar oo wax looga qabanayo abaaraha | Warbaahinta Ayaamaha
QM oo dalbaday Mallaayiin Dollar oo wax looga qabanayo abaaraha
MUQDISHO-AYAAMAHA-Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday 17 milyan oo dollar oo qeyb ka ah dadaallada gargaarka bani’aadminnimada ee wax looga qabanayo xaaladda degdegta ah ee abaarta Soomaaliya, loona caawiyo dadka nugul ee abaartu saameysay.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed wadajir ah oo kasoo baxay Qaramada Midoobay iyo saaxibada samafalka Soomaaliya ayaa soo saaray Qorshaha ka-jawaabista xaaladda Bani’aadamnimo ee Soomaaliya ee 2022 kaas oo baadi goob ugu jiraa 1.5 bilyan oo dollar, si loo caawiyo 5.5 milyan oo Soomaali ah oo ay ku jiraan 3.9 milyan oo aan aheyn barakacayaal iyo 1.6 milyan kale oo ay ku jiraan dadka qaba baahiyaha gaarka ah oo ku nool 74 degmo.
“Nolosha dadka Soomaaliyeed waxay ku jirtaa halis, mana haysanno waqti aan lumino,” ayuu yiri madaxa bani’aadantinimada ee Qaramada Midoobay Martin Griffiths oo intaas raaciyay.
“Si loo badbaadiyo nolosha Soomaaliya, loogana hortago masiibo bini’aadantinimo oo kale, waa inaan hadda fasaxnaa gargaarka, si dadku ay uga badbaadaan gaajo iyo faqri hor leh. Waxaan maanta ka soo saarayaa $17 milyan Sanduuqa Dhexe ee Waxqabadka Degdegga ah”
Martin Griffiths ayaa ugu baaqay deeq-bixiyeyaasha kale inay si ‘deeqsinimo’ leh u taageeraan Sanduuqa Bini’aadaimno ee Soomaaliya.
Waxay sheegeen in qorshaha HRP uu mudnaan siin doontaa 5 milyan oo ka mid ah dadka aadka u nugul, oo ay ku jiraan 1 milyan oo carruur ah oo da’doodu ka yar tahay shan jir.